To advocate for further sanctions against Tay Za and HGC, and to support sanctions enforcement, Justice For Myanmar has published data on Tay Za’s business network and links to the Myanmar military and its junta.
Telenor ble klaget inn til OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv da det ble kjent at Myanmar-virksomheten skulle selges til omstridt libanesisk forretningsmann. Nå er det bestemt at klagen skal behandles.
အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ ဒဏ်ခတ်အရေးယူခြင်းခံထားရသည့် ထိပ်သီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဦးတေဇနှင့် ၎င်းပိုင် ထူးကုမ္ပဏီအုပ်စုကို နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက ထပ်မံ၍ ပစ်မှတ်ထားအရေးယူရန် Justice For Myanmar(JFM) က ယနေ့ (စက်တင်ဘာ ၂၇) တောင်းဆိုလိုက်သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဦးတေဇနဲ့ သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ ထူးထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီအုပ်စုကို နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် လုပ်ဆောင်ကြဖို့ Justice for Myanmar (JFM) အဖွဲ့က ဒီကနေ့ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Singapore Stock Exchange-listed company Emerging Towns & Cities Singapore (ETC) has released an extract of the first of two independent review reports into the company’s business in Myanmar, providing further details of payments to the Myanmar army.